ZBC Yoendeswa kuMatare neMasachigaro eCOPAC
WASHINGTON — Vana sachigaro vekomiti yeparamende iri kutungamira kunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika, yeCOPAC, vanomirira mapato maviri ehurumende yemubatanidzwa vanoti vari kuendesa Zimbabwe Broadcasting Corporation, ZBC, kumatare edzimhosva vachipomera mhosva yekusvibisa mazita avo uye kuda kupesvedzera vanhu kuti vavaite kanyama kanyama.
ZBC iri kupomerwa mhosva yekuti yakati mutauriri weMDC-T, VaDouglas Mwonzora, naVaMunyaradzi Paul Mangwana veZanu-PF, vakafanana nemutengesi ainzi Morrison Nyathi, uyo akaurayisa varwiri verusununguko munguva yehondo.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa divi reZBC panyaya iyi. VaMangwana vanoti vanoda miriyoni imwe yemadhora kubva ku ZBC nekuti yakasvibisa zita ravo.
VaMwonzora vanotiwo vari kutaura nemagweta avo kuitira kuti vaendese mapepa avo vachigunun'una nekusvibiswa kwezita ravo.
Ukuwo hurongwa hwekuita musangano weSecond All Stakeholders Conference hunenge wodazve kuramba huchinetsa mushure mekunga COPAC yakwidzwa kudare repamusoro neChipiri ichinzi imise chirongwa chekuita musangano uyu kusvika yaburitsa gwaro rezvakaitika munyika paiunganidzwa pfungwa dzevanhu, reNational Statistical Report.
Aka ndekechipiri COPAC ichiendeswa kumatare nenyaya iyi sezvo nhengo yeZanu PF, uye vari mutungamiri vesangano reFederation of Non Governmental Organizations, VaGoodson Nguni, vakaendesawo COPAC kudare repamusoro soro.
Asi VeMDC-T muCOPAC vari kupikisa nyaya iyi, kunyange hazvo veZanu-PF vachiti vari kutsigira VaNguni. Musangano weCOPAC wange uchifanira kutanga musi wa 21 Gumiguru uno. Asi nekunetsana kuri kuitika pakati pemapato kuri kuramba kuchienderera mberi, zvinhu zvichanetsa.
Munyori mukuru muMDC inotungamirwa naVaWelshman Ncube, Amai Priscilla Misihairambwi Mushonga, vanoti vave kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya sezvo vasiri kuronga All Stakeholders Conference.